NKWUKWU, NKWUKWU, NGBANWEE NA MGBANYE MGBE - shoppingdirect24.com - SD24
Home > NKWU ỤLỌ, MGBE ỌZỌ, MGBE MGBE MGBA NA MGBE ỌZỌ
Ị nweta ego gị ma ọ bụrụ:
- ngwaahịa a na-enyeghị dị ka akọwapụtara, ụda ma ọ bụ agba ọzọ karịa iwu
- ngwaahịa a na-ebute bụ ihe adịgboroja ma kọwaa dị ka nke mbụ
- ngwaahịa a na-ebute nwere mmebi ndị ọzọ
Anyị enweghị ọrụ:
- maka mmebi na nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ ngwaahịa nke ọrụ nnyefe ozi
- ma ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ zitere azụ site na ozi nnyefe ozi maka ihe ndị na-abụghị nchịkwa anyị
EKPỤTA & ECHICHE
Obi dị anyị ụtọ na anyị na-enye mba ụwa n'efu n'uwa niile maka ihe niile! Anyị na-ekpuchi ụgwọ mbupu - ebe ọ bụla ị bụ!
Olee otú ị ụgbọ mmiri nchịkọta?
Nchịkọta sitere na ndị na-emepụta ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ndị nkesa na China, Hong Kong ma ọ bụ Shanghai ga-ezipụ site na Epacket ma ọ bụrụ na mba gị nwere ike iji kwenye ngwa ngwa ma ọ bụghị site na ọrụ ndị kachasị mma.
A ga-eji ngwa maka ngwaahịa ndị sitere na mpaghara ndị ọzọ ga-arụ ọrụ site n'iji ọkọlọtọ, ọ gwụla ma a gwara ya.
A ga-emepụta ya ma bipụta ya site n'aka otu n'ime ihe anyị mere na ndị na-achọ akwụkwọ na ndị mmepụta. Maka ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-achọpụta ngwaahịa na mbupu ụgbọ mmiri dị n'ọtụtụ mba na mba (US, mba dị iche iche EU na Australia). N'ọtụtụ ọnọdụ, ụlọ ọrụ kacha nso gị ga-eji meepụta ma bubata ngwaahịa ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ nwa amaala obodo anyị, anyị ga-agbalịsi ike ịmepụta na ụgbọ mmiri site na EU iji zere ị nwere nsogbu na omenala ma ọ bụ nsogbu mbubata. Maka United States, Australia na mpaghara na mpaghara ndị ọzọ dị ka ngwọta dị, a ga-etinye ha n'ọrụ, ma ọ bụrụ na ọ dị. Enwere ike itinye ya na ọ dị mkpa maka ihe ndị dị mkpa ma ọ bụ ọkwa ngwaahịa na nnweta.
Gịnị banyere omenala?
Dị ka ndị ọzọ na retailers, wenweghi ike ijide ụgwọ maka omenala ọ bụla, mbubata mbubata ma ọ bụ ụgwọ nchịkwa mpaghara ebe ọ bụ mgbe e zigara ihe ndị ahụ. Ọnọdụ omenala na-adịgasị iche iche site na mba na enwere mgbanwe mgbe niile. Site n'ịzụta ngwaahịa anyị, ị kwenyere na otu ma ọ bụ karịa nchịkọta maka otu usoro nwere ike ịnye gị ma nwee ike ịnweta ụgwọ omenala na njikwa ego mgbe ha rutere mba gị ma dabere na iwu obodo gị.
Ị nwere ike ịjụ ma ọ bụ chọọ na netwọk gbasara ala omenala gị tupu ịzie. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ngwongwo ga-abata n'enweghị nsogbu dị otú ahụ.
Ogologo oge hà aṅaa mbupu na-?
Oge mbupu dị iche site ebe. Ndị a bụ atụmatụ anyị, mana enweghi ike ijide n'aka:
Echere oge a ga-eji oge mbupu
United States 4-15 ụbọchị azụmahịa
Canada, Europe 6-25 ụbọchị azụmahịa
Australia, New Zealand 6-30 Business business
Central & South America 15-55 Business ụbọchị
Ebe ọzọ na-aga 15-55 Business ụbọchị
Ị na-enye nsuso ozi?
Ee, anyị ga-eji nchikota nchikota ma ọ bụrụ na ọ dị maka iwu gị. Ị ga-enweta ozi-e ozugbo ị ga-esi n'ụgbọ mmiri gị nke nwere ozi nlekota gị.
My nsuso-ekwu na "ọ dịghị ozi dịnụ n'oge".
Maka ụfọdụ ụlọ ọrụ mbupụ, ọ na-ewe ụbọchị 1-5 iji hazie usoro gị ma ọ ga-ewe ụbọchị 2-5 ụbọchị azụmahịa maka ozi nchịkọta iji melite na usoro ahụ. Ọ bụrụ na e debere iwu gị karịa 6 ụbọchị ahịa n'ụbọchị gara aga ma ọ ka enweghị ozi gbasara nọmba nchịkọta gị, biko kpọtụrụ anyị.
Ga m ihe ike izipụ otu ngwugwu?
Maka ihe ndekọ aha, ihe ndị dị n'otu ịzụta ga-eziga mgbe ụfọdụ na nchịkọta dị iche iche.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko kpọtụrụ anyị na anyị ga-eme ike anyị niile inyere gị aka.
MGBE IKE NA MGBE IGBANYE
Ihe ọ bụla kpatara ihe nkwụghachi ma ọ bụ nzaghachi ngwaahịa nwere ike ịbụ, anyị ga-agbasi mbọ ike maka ezi mkpebi!
Enwere ike ịkagbu iwu niile ruo mgbe ha gafere. Ọ bụrụ na a kwụrụ ụgwọ gị ma na ịchọrọ ime mgbanwe ma ọ bụ kagbuo iwu, ị ga-akpọtụrụ anyị ozugbo. Ozugbo usoro nkwakọ ngwaahịa na mbupu bidoro amalite, a pụghị ịkwụsị ya ọzọ.
Ị nweta nkwụghachi mgbe:
- Ihe ị nyere iwu anaghị abata n'ime oge ahụ kwere nkwa - anyị nwere ụbọchị 60 profaịlụ nke a na-enye n'aka, ebe ọtụtụ ngwaahịa na-abata na mbụ.
- Ihe ị nwetara nke emere ka obi sie gị ike na ọ bụ ezigbo, ma adịgboroja
Ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ọ bụla na ịchọrọghị ngwaahịa ị nwetara, ị nwere ike ịrịọ maka nkwụghachi ma ị ghaghị ịghaghachi ihe ahụ ma ihe ahụ ga-ejighi ya na nkwakọ ngwaahịa mbụ. N'aka nke ọzọ, n'ihi ihe eji akụ na ụba (karịsịa maka uru dị ala) ma n'okpuru mkpebi anyị, ị nwere ike ịchọ ikikere iji bibie ngwaahịa ahụ ma ziga anyị foto-ihe akaebe - maka nhọrọ a biko kpọtụrụ anyị na mbụ. Anyị ga-enye ndụmọdụ na adreesị nzaghachi maka ihe ahụ.
Nkwụghachi ụgwọ ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na e nwetara ihe na-ezighị ezi n'ihe gbasara agba, nha, ma ọ bụ ihe nlereanya (ihe ngosi dị mkpa [foto]).
Nkwụghachi ụgwọ nwekwara ike ọ bụrụ na tọ na-abata n'ụdị dara ogbenye (ihe ngosi dị mkpa [foto]).
Ịkwesịrị ịkpọtụrụ ọrụ nnyefe ozi gị ma ọ bụrụ:
- Ngwongwo ahụ abatawo na ọnọdụ mebiri emebi
- Iwu ahụ agakwaghị efu
Biko rịba ama na nha nha nyere nwere ike ịdị ntakịrị, ebe a na-ejikarị aka eme ihe.
Ụdị na fotos ngwaahịa nwere ike ịdị iche dịka ntụgharị mmetụta, ikuku igwefoto ma ọ bụ mmepụta ihuenyo kọmputa.
Anyị enweghị ike ịnweta nloghachi na ngwaahịa ndị a chọrọ n'aka gị. Emere ka a chọpụta ngwaahịa ndị a dị ka ndị dị otú ahụ na nkọwa ngwaahịa.
Akwụghị ụgwọ ọ bụla ma ọ bụrụ:
- Iwu gị abataghị n'ihi ihe ndị na-achịkwa gị (yabụ ịnye adreesị ọdụ ụgbọ na-ezighị ezi, pụọ n'ụlọ ruo ogologo oge na / ma ọ bụ na-ezigara ya site na ụlọ ọrụ nzipu ozi dịka enweghị ike)
- Iwu gị abataghị n'ihi ọnọdụ ndị dịpụrụ adịpụ na-abụghị nchịkwa anyị (ya bụ, ịhapụghị omenala, oge ọdachi na-egbu oge).
Ọnọdụ ndị ọzọ dịpụrụ adịpụ na-enweghị njikwa anyị.
Ịnwere ike ịnye arịrịọ nkwụghachi azụ n'ime ụbọchị 15 mgbe oge a ga-akwụ ụgwọ maka nnyefe (60 ụbọchị). Ị nwere ike ime ya site na iziga ozi na ibe Kpọtụrụ anyị.
Biko mara na tọ bụ ego ọhụụ na ụlọ ọrụ MLVEDA na-achịkwa ya. A ga-ebute gị gaa na ibe ha maka usoro ahụ. A na-akwụ ụgwọ na ịkwụ ụgwọ na ego gị ahọpụtara.